Onyankopɔn Suban Te Sɛn?
Ɔwɛn-Aban | No. 1 2019
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mpɛn dodow a yehu obi suban no, dodow no ara na yehu sɛnea ɔte, na wei betumi ama yɛne n’adamfofa mu ayɛ den. Saa ara na sɛ yehu Yehowa su ahorow no yiye a, ɛbɛma yɛahu sɛnea ɔte, na ebetumi ama yɛne n’adamfofa mu ayɛ den. Onyankopɔn wɔ su ahorow pii a ɛyɛ fɛ, nanso emu nnan de, ɛda nsow: ne tumi, ne nyansa, n’atɛntrenee, ne ne dɔ.
ONYANKOPƆN WƆ TUMI
‘O Awurade Tumfoɔ Yehowa! Hwɛ, wo na wode wo tumi yɛɛ ɔsoro ne asase.’—YEREMIA 32:17.
Tumi a Onyankopɔn wɔ no, yehu wɔ n’adebɔ mu. Nhwɛso bi ni. Sɛ owia bɔ na wupue kogyina abɔnten a, wote nka sɛn wɔ wo honam ani? Wote sɛ owia a ɛrebɔ no yɛ hyew. Saa ɔhyew no fi Yehowa tumi a ɔde bɔɔ ade no mu. Owia no ano den te sɛn? Ɔhyew a ɛwɔ owia no mfinimfini no bɛyɛ digrii Celsius ɔpepem 15. Anibu biara mu no, tumi a efi owia mu ba no, ɛne tumi a ɛwɔ nuklea atopae ɔpehaha pii mu no yɛ pɛ.
Nanso, nsoromma ɔpepepem pii a ɛwɔ amansan no mu no, sɛ yɛde owia no toto emu bi ho a, owia no sua koraa. Nyansahufo kyerɛ sɛ nsoromma a ɛsoso pa ara no, wɔfrɛ emu baako UY Scuti. Ne kɛse te sɛ owia no mmaako mmaako 1,700 a yɛaka abom. Baabi a owia no wɔ no, sɛ yɛde UY Scuti kɔhyɛ hɔ a, sɛnea ɛsõ no nti, ɛbɛmene asase yi koraa akɔ ara akɔtra okyinnsoromma Jupiter. Yebetumi aka sɛ wei boa ma yɛte asɛm a Yeremia kae no ase yiye. Ɔkaa sɛ, Yehowa Nyankopɔn na ɔde ne tumi yɛɛ ɔsoro ne asase, kyerɛ sɛ, amansan yi nyinaa.
Sɛn na Onyankopɔn tumi no boa yɛn? Owia ne nneɛma ahorow a ɛwɔ asase so a Onyankopɔn abɔ no na ɛboa yɛn ma yɛtena nkwa mu. Ne nyinaa akyi no, Onyankopɔn san de ne tumi boa yɛn mu biara. Ɔkwan bɛn so? Bere a na Yesu wɔ asase so no, Onyankopɔn maa no tumi ma ɔde yɛɛ anwonwade pii. Bible ka sɛ: “Anifuraefo hu ade bio, na mmubuafo nantew, akwatafo ho fi na asotifo te asɛm, wonyan awufo.” (Mateo 11:5) Ɛnnɛ nso ɛ? Bible san ka sɛ: ‘Ɔma nea wabrɛ no tumi, na wɔn a wɔde wɔn ho to Yehowa so no benya ahoɔden foforo.’ (Yesaia 40:29, 31) Onyankopɔn betumi ama yɛn “tumi a ɛboro onipa de so,” na yɛde agyina asetenam nsɛnnennen ne sɔhwɛ ahorow ano. (2 Korintofo 4:7) Wohwɛ sɛnea Onyankopɔn dɔ yɛn na ɔde ne tumi a enni ano no boa yɛn no a, w’ani nnye ho sɛ wobɛbɛn no?
ONYANKOPƆN YƐ ONYANSAFO
“O Yehowa, wo nnwuma dɔɔso dɛn ara! Nyansam na woayɛ ne nyinaa.”—DWOM 104:24.
Mpɛn dodow a yesua nneɛma a Onyankopɔn abɔ ho ade no, dodow no ara na ne nyansa ma yɛn ho dwiriw yɛn. Nyansahufo bi wɔ hɔ a, adwuma a wɔyɛ ara ne sɛ wɔhwɛ nneɛma a Yehowa abɔ so yɛ nneɛma bebree. Nea wɔyɛ no, efi nneɛma nketenkete so kosi biribi te sɛ wimhyɛn so.
Sɛnea Onyankopɔn bɔɔ onipa aniwa no yɛ nwonwa
Nneɛma a Onyankopɔn ayɛ a ɛma yehu ne nyansa no, nea ɛyɛ nwonwa wom pa ara ne sɛnea ɔyɛɛ onipa. Susuw sɛnea abofra nyin wɔ ne maame yafunum no ho hwɛ. Nkwaboaa baako pɛ na efi ase. Ɛno na onipa no awosu ho nsɛm nyinaa wom. Saa nkwaboaa baako no, emu kyekyɛ, na ɛbɛyɛ nkwammoaa bebree a edi nsɛ. Bere a ɛfata mu no, emu kyekyɛ bio ma yenya mogya de, dompe de, adwene de, ne nea ɛkeka ho. Ɛnkyɛ, na nipadua no afã ahorow nso aba. Ebi te sɛ nipadua no fã a ɛma ɔhome, ɛma odidi, ɛma mogya di aforosian wɔ ne mu, ne nea ɛkeka ho. Afei ne nyinaa fi ase yɛ adwuma. Abosome nkron pɛ mu no, nkwaboaa baako no nyin bɛyɛ abofra ketewa. Nkwammoaa ɔpepepem pii na ɛka bom yɛ saa abofra yi. Adebɔ mu nyansa yi, sɛ nnipa pii dwen ho a, ɛma wɔne Bible kyerɛwfo yi yɛ adwene. Ɔkaa sɛ: “Mɛkamfo wo efisɛ sɛnea woyɛɛ me no yɛ hu na ɛyɛ nwonwa.”—Dwom 139:14.
Sɛn na Onyankopɔn nyansa boa yɛn? Ɔbɔadeɛ no nim nea yehia na ama yɛn ani agye. Esiane sɛ ɔwɔ nimdeɛ pii na otumi hu ade kɔ akyiri nti, wama yɛn afotu a nyansa wom wɔ n’Asɛm Bible mu. Ebi ne sɛ, Bible tu yɛn fo sɛ: ‘Monkɔ so mfa mfirifiri mo ho korakora.’ (Kolosefo 3:13) Saa afotu yi, nyansa wom anaa? Yiw. Adɔkotafo kyerɛ sɛ, sɛ yɛde bɔne kyɛ a, ebetumi ama yɛn nna ayɛ yɛn dɛ, na ebetumi ama yɛakwati mogya mmoroso. Afei nso, ebetumi ama yɛn adwinnwen so atew, na yɛade yɛn ho afi nyarewa ahorow bi ho. Onyankopɔn te sɛ adamfo bi a onim nyansa na odwen yɛn ho. Daa ɔma yɛn afotu a mfaso wɔ so. (2 Timoteo 3:16, 17) Wunya adamfo a ɔte saa a, anka wompɛ?
ONYANKOPƆN BU ATƐNTRENEE
“Yehowa dɔ atɛntrenee.”—DWOM 37:28.
Bere nyinaa Onyankopɔn yɛ nea ɛteɛ. “Ɛmpare nokware Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ bɔne, ne ade nyinaa so Tumfoɔ sɛ ɔbɛyɛ nea ɛnteɛ!” (Hiob 34:10) N’atemmu nyinaa teɛ. Saa na odwontofo no kae bere a na ɔne Yehowa rekasa no. Ɔkaa sɛ: “Teeyɛ mu na wubebu aman atɛn.” (Dwom 67:4) Esiane sɛ ‘Yehowa hwɛ komam’ nti, obi a ɔyɛ nyaatwom ntumi nnaadaa no. Mmom no, bere nyinaa Onyankopɔn tumi hu nokwasɛm a ɛwɔ asɛm biara mu, na obu atɛntrenee. (1 Samuel 16:7) Bio nso, ntɛnkyea ne nsisi a ɛrekɔ so wɔ asase so nyinaa, Onyankopɔn nim. Wahyɛ bɔ sɛ ɛrenkyɛ ‘obetwa abɔnefo afi asase so.’—Mmebusɛm 2:22.
Nanso Onyankopɔn nyɛ ɔtemmufo a ne tirim yɛ den a nea ɔpɛ ara ne sɛ ɔbɛtwe abɔnefo aso. Bere biara a ɛfata no, ɔda mmɔborɔhunu adi. Bible ka sɛ: “Yehowa yɛ mmɔborɔhunufo ne ɔdomfo.” Abɔnefo mpo, sɛ wofi wɔn komam sakra a, ohu wɔn mmɔbɔ. Wohwɛ a, ɛnyɛ wei pa ara na yɛfrɛ no atɛntrenee?—Dwom 103:8; 2 Petro 3:9.
Sɛn na Onyankopɔn atɛntrenee boa yɛn? Ɔsomafo Petro kaa sɛ: “Onyankopɔn nhwɛ nnipa anim, na mmom ɔman biara mu no, onipa a osuro no na ɔyɛ adetrenee no, ogye no tom.” (Asomafo Nnwuma 10:34, 35) Nea enti a Onyankopɔn atɛntrenee boa yɛn ne sɛ, ɔnyɛ nyiyim na ɔnhwɛ nnipa anim. Ɛmfa ho abusua a yefi mu, ɔman a yefi mu, sukuu a yɛakɔ anaa yɛn dibea no, obetumi agye yɛn atom na yɛayɛ n’asomfo.
Onyankopɔn nyɛ nyiyim, enti ɛmfa ho abusua a yefi mu anaa yɛn dibea no, yebetumi anya ne nhyira
Esiane sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yɛte n’atɛntrenee ase na yenya so mfaso nti, wama yɛn ahonim. Bible ka ahonim no ho asɛm sɛ ɛyɛ mmara a ‘wɔakyerɛw agu yɛn komam,’ na sɛ yɛyɛ papa anaa bɔne a, ɛno na ‘edi ho adanse.’ (Romafo 2:15) Sɛn na yenya so mfaso? Sɛ yɛtete yɛn ahonim yiye a, ebetumi aboa yɛn ama yɛatwe yɛn ho afi biribiara a ebetumi apira yɛn anaa nneyɛe bɔne ho. Na sɛ yɛyɛ bɔne a, ebetumi aka yɛn ama yɛanu yɛn ho na yɛateɛ yɛn akwan. Anokwa, sɛ yɛte Onyankopɔn atɛntrenee ase a, ɛbɛboa yɛn ama yɛabɛn no!
ONYANKOPƆN NE DƆ
“Onyankopɔn ne dɔ.”—1 YOHANE 4:8.
Onyankopɔn da tumi, nyansa ne atɛntrenee adi, nanso Bible nka sɛ Onyankopɔn ne tumi, nyansa, anaa atɛntrenee. Ɛka sɛ Onyankopɔn ne dɔ. Adɛn ntia? Efisɛ yebetumi aka pa ara sɛ tumi a Onyankopɔn wɔ no na ɔde yɛ ne nnwuma. N’atɛntrenee ne ne nyansa na ɛkyerɛ sɛnea ɔyɛ n’ade. Nanso, Yehowa dɔ de, ɛno na ɛkanyan no ma ɔyɛ biribiara.
Ɛwom sɛ na Yehowa nhia hwee de, nanso ne dɔ na ɛkanyan no ma ɔbɔɔ nnipa ne abɔfo wɔ ɔsoro ne asase so sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛhwɛ wɔn so na wɔanya ne dɔ so mfaso. Oyii ne yam siesiee asase no kama de maa nnipa a ɔbɔɔ wɔn no sɛ wɔntena so. Na ɔda so ara da ne dɔ adi kyerɛ nnipa efisɛ “ɔma n’awia pue nnipa bɔne ne nnipa papa so na ɔma osu tɔ gu treneefo ne abɔnefo so.”—Mateo 5:45.
Afei nso, “Yehowa wɔ ayamhyehye ne mmɔborɔhunu.” (Yakobo 5:11) Ɔda ɔdɔ adi kyerɛ wɔn a wofi wɔn komam hwehwɛ n’akyi kwan na wɔpɛ sɛ wɔbɛn no no. Onyankopɔn ani kũ nnipa a wɔte saa no mu biara ho. Nokwasɛm ni, ‘odwen wo ho.’—1 Petro 5:7.
Sɛn na Onyankopɔn dɔ boa yɛn? Sɛ owia rekɔtɔ a, ɛyɛ yɛn fɛ. Sɛ yɛte sɛ abofra bi reserew a, yɛn ani gye. Sɛ yɛn ho nnipa bi da ɔdɔ adi kyerɛ yɛn a, ɛma yɛn koma tɔ yɛn yam pa ara. Ɛnyɛ saa nneɛma yi na ɛma yɛtena nkwa mu de, nanso ɛma yɛn ani gye kɛse.
Ade foforo a Onyankopɔn yɛ de kyerɛ sɛ ɔdɔ yɛn ne sɛ, ɔma yɛbɔ no mpae. Bible ka kyerɛ yɛn sɛ: “Munnnwinnwen biribiara nnhaw mo ho, na mmom momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ ne aseda so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim ade nyinaa mu.” Onyankopɔn te sɛ agya bi a ɔdɔ yɛn, enti nneɛma a ɛhaw yɛn nyinaa, ɔpɛ sɛ yɛhwehwɛ mmoa fi ne hɔ. Esiane sɛ Yehowa dɔ yɛn pa ara nti, sɛ yɛhwehwɛ ne mmoa a, wahyɛ bɔ sɛ ɔde nea Bible aka yi bɛma yɛn: “Onyankopɔn asomdwoe a ɛboro adwene nyinaa so.”—Filipifo 4:6, 7.
Yɛaka Onyankopɔn su atitiriw nnan no ho asɛm. Ɛno ne ne tumi, ne nyansa, n’atɛntrenee ne ne dɔ. Wei aboa wo ama woahu sɛnea Onyankopɔn te anaa? Nea ɛbɛyɛ na woahu pii afa Onyankopɔn ho no, yɛhyɛ wo nkuran sɛ toa so sua nea wayɛ ne nea ɔbɛyɛ daakye ho ade, na ɛbɛboa wo.
ONYANKOPƆN SUBAN TE SƐN? Obiara nni hɔ a ɔwɔ tumi ne nyansa na obu atɛntrenee sen Yehowa. Nanso ne su a yɛn ani gye ho pa ara ne ne dɔ
Wɔbɔe Anaa? Sɛnea Wubenya Onyankopɔn Mu Gyidi Onyankopɔn Mu Gyidi Onyankopɔn Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae
Nneɛma Bɛn Na Onyankopɔn Ayɛ?
Sɛ wuhu nneɛma a Onyankopɔn ayɛ a ɛbɛma yɛanya asetena pa daakye a, ebia ɛbɛyɛ wo nwonwa.
Onyankopɔn Te Wo Ase Anaa?
Sɛnea Onyankopɔn nim yɛn yiye na ɔte yɛn awosu ase wɔ ɔkwan soronko so no, ɛma yenya awerɛhyem sɛ biribiara mu no, ɔte yɛn ase.
Onyankopɔn Din De Sɛn?
Dɛn Na Onyankopɔn Abɔ Ne Tirim Sɛ Ɔbɛyɛ?
Wuhu Onyankopɔn Yiye a, Mfaso Bɛn Na Wubenya?
Wubetumi Abɛn Onyankopɔn
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN No. 1 2019 | Hena Ne Onyankopɔn?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN No. 1 2019 | Hena Ne Onyankopɔn?
No. 1 2019 | Hena Ne Onyankopɔn?
ƆWƐN-ABAN No. 1 2019 | Hena Ne Onyankopɔn?
Dɛn na Bible Aka Afa Atɛntrenee Ho?